Wasiir maareeyey oo cambaareeyey Qaraxii kadhacey Garoowe – Radio Baidoa
By Webmaster	 On Mar 30, 2020
Wasiirka Warfaafinta iyo Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo cambaareeyey qaraxii ka dhacay magaalada Garoowe ayaa sheegay in falkan uu muujinayo sida Al-Shabaab dadka u dhibaateynayaan.
Wasiirka ayaa tilmaamay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay heegan kaga jiraan ka hortagga cudurka Koroona oo ah musiiba Caalami ah ,alse Al-Shabaab ay uga soo dareen.
“Wakhtiyadii abaaraha adag ay ka dhaceen dalka, fatahaadihii sababay xaaladaha binu aadantinimo iyo maanta oo aan la tacaaleynayo ka hor tagga cudurka Koroona intaas oo xaaladood iyo kuwo ka adagba argagixisadu waxa ay la barbar socdeen gumaad iyo weeraro ayuu yiri”Wasiirka Warfaafinta.
Wasiir Maareeye ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay midnimo iyo wadajir kaga gudbaan marxaladahan adag oo gacanna ay iskaga xoreeyaanShabaab, gacanta kalena ay kaga hortagaan musiibada caalamiga ah ee cudurka Koroona.
Wasiirka ugu dambeyn ayaa ka tacsiyeeyay geerida Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Marxuum Cabdisalaan Xasan Xirsi, wuxuuna ayaa Alle caafimaad deg-deg ah uga barya saraakiisha ciidan iyo dhammaan dadka birmo-geydada ahaa ee ku waxyeeloobay qaraxaas.
DHAGEEYSO,,Maamulka Gobolka Banaadir oo Amrey in laxiro hotelada iyo maqaayadaha liido